ITB Berlin: hoy ny UNWTO tsia, nilaza ny ICTP eny amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny alàlan'ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » ITB Berlin: hoy ny UNWTO tsia, nilaza ny ICTP eny amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny alàlan'ny fizahan-tany
Fizahan-tany azo idirana • Airlines • Airport • Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • People • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fanararaotana ara-nofo ny ankizy amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, fanondranana olona an-tsokosoko zaza noho ny fizahan-tany - izany no zava-misy mampalahelo amin'ny indostrian'ny mpitsidika ankehitriny. Ireo mpandray anjara lehibe amin'ny tontolon'ny fiaramanidina sy ny fandraisam-bahiny dia nanome lanja betsaka ny fanomezana fiofanana sy fanentanana amin'ity lafiny maizin'ny dia ity. Ny vondrona Interpol sy ny polisim-pirenena toa an'i Scotland Yard, ny FBI, ary ny Royal Dutch Police dia sasany amin'ireo mpanohana mavitrika ary mora vonona hanatrika ireo fivoriana manerantany toy ny fivoriana fanao isan-taona an'ny UNWTO ho an'ny Fiarovana ny Ankizy mandritra ny fampiroboroboana ny varotra ITB any Berlin.
Nandritra izay 20 taona lasa izay, ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany manerantany (UNWTO) dia nanome sehatra tsy ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka ho fiarovana ny zaza ihany fa ho an'ireo vondrona te-hampiseho hetsika, fanamby ary fomba fanao tsara indrindra amin'ny hetsika ampahibemaso nandritra ny fampisehoana varotra ITB isan-taona tany Berlin, Alemana. Ny fivoriana faharoa tao amin'ny World Travel Market (WTM) tany London dia nofoanan'ny UNWTO noho ny olana ara-teti-bola taona maro lasa izay.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Taleb Rifai, dia nanao ny laharam-pahamehana ny fiarovana ny zaza fony izy nitantana ny masoivohon'ny Firenena Mikambana hatramin'ny faran'ny taona lasa. Taorian'ny nitondran'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO vaovao Zurab Pololikashvili ny masoivoho natokana ho an'ny ONU tamin'ny taona 2018, gaga ireo mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka rehefa nampandre azy ireo ny Sekretariatin'ny UNWTO iray volana talohan'ny ITB fa nofoanana ny fivorian'izy ireo. Tsy nisy antony mazava nomena. eTN dia nanohina hatrany amin'ny UNWTO raha te hahalala bebe kokoa. Nangina ity fangatahana ity.
Tao anatin'ny ezaka farany natao, ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany (ICTP), teo ambany fitarihan'ny filohany Juergen Steinmetz, izay mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka UNWTO ho fiarovana ny zaza ihany koa dia nanomana fivoriana tsy ofisialy sy misokatra an'ireo mpiaramiombon'antoka UNWTO, mpikambana ao amin'ny ICTP, ary izay liana amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny fizahantany. Tsy nisalasala iray minitra akory ny talen'ny tale jeneralin'ny fizahan-tany any Nepal Deepak Raj Jos ary nanokatra ny fijoroany tamin'ity fivoriana ity
“Mampalahelo fa nampitsahatra ny hetsika ny UNWTO. Manohana sy mankasitraka ny fandraisana andraikitra ataon'ny ICTP izahay, ”“ Ampy izay ny fanararaotana zaza tsy ampy amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, ary tohananay ny fandraisana andraikitra amin'ny alàlan'ny fizahan-tany ary tianay ny hetsika, ”dia valinteny mahazatra azon'ireo solontena 28 nisoratra anarana hatreto.
Dorothy Rozga, Tale Mpanatanteraka an'ny ECPAT International, dia nanoratra: "Tsy nikasa ny ho tonga amin'ny ITB aho amin'ity taona ity. Na izany aza, ho valin'ny tetik'asa tsara sy ankafizinao, dia ho tonga any amin'ny fivoriana aho. ”
Hatreto dia nahazo fisoratana anarana 28 ny ICTP avy any Thailand, India, UK, Belgique, Netherlands, Zimbabwe, Germany, Pakistan, Guinea Bissau, USA, Serbia, Nepal, ary South Africa.
Ny solontena avy amin'ny ECPAT, THE CODE, WYSE, ABTA, WSO, ary ny Ministeran'ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena Thailand, ary koa ny International Delphic Council dia mikasa ny hanatrika. Nanasa ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, ny ICTP, saingy tsy namaly izany ny UNWTO.
Izay manatrika ITB Berlin amin'ny herinandro ambony dia asaina handray anjara. fisoratana anarana: http://ictp.travel/itb2018/
RAHOVIANA? Zoma 9 martsa 2018: 11.15 h
AIZA? ITB Berlin, Mijoroa 5.2a / 116 (Birao fizahantany Nepal)
IZA? Mpikambana ao amin'ny ICTP, mpitarika ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany, fikambanana ary media
REGISTER: kitiho eto
Steinmetz, izay mpanonta ny eTurboNews, hoy izy: “Zava-dehibe loatra ny fiarovana ny zaza ka tsy raharahiana amin'ny hetsika indostrialy fitsangantsanganana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Faly aho mahita ireo fikambanana sy firenena mampiseho fahaiza-mitarika. Misokatra ho an'izay maniry handray anjara amin'ny fivorianay izahay. Manasa an'izay te hianatra bebe kokoa momba ny fomba hiditra an-tsehatra izahay. Manantena izahay fa handinika anay koa i UNWTO, WTTC, ary PATA. Nasainay ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, hanatevin-daharana anay, saingy tsy nisy valiny hatreto. Misoratra anarana ao amin'ny http://ictp.travel/itb2018/ ary hahita anao any Berlin. ”